DreamHack Masters Dallas 2019 CSGO Tournament Review – Gaming Noodle
DreamHack Masters Dallas 2019 CSGO Tournament Review
Hi! အားလုံးပဲ ကျန်းမာရွှင်လန်းပါရဲ့လား ကျတော် Fairy ပါခင်ဗျာ။ မကြာခင်စတော့မယ့် DH Masters Dallas 2019 အတွက် အသင်းတွေရဲ့ အခြေအနေ လေးတွေ သုံးသပ်ပေးသွားပါမယ်။ Double Elimination ကို မှ Group A Group B ခွဲထားလို့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတင်ပေးပါမယ်။
Liquid ကတော့ Individual skill တွေ ထိပ်တန်းမှာ ဖြစ်နေဆဲပဲဖြစ်ပေမယ့် Vitality ကို CS Summit-4 semi-final မှာ 2-0 နဲ့ရှုံးသွားတာက တော့ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းခဲ့တဲ့ Vitality ကြောင့်လို့ပဲထင်ပါတယ် မကြေပွဲပြန်နွှဲမှာကို Bracket အရ စောစောတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Onfire ဖြစ်နေတဲ့ Vitality ကိုသာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့ DH Masters ဟာသူတို့လက်ထဲရောက်ဖို့များသွားပါပြီ။
Vitality အနေနဲ့ကတော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ရဲ့ Young and talented player Zywoo ရဲ့ လက်စွမ်းတွေနဲ့အတူ CS Summit-4 မှာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် G2 ကစားသမားဟောင်း NBK APEX တုိ့ရဲ့ အတွေ့ အကြုံတွေနဲ့ အတူ တစ်ပါတ်အတွင်း competitive scene က pro player တွေရဲ့ KD Difference မှာ Top 1 က ဦးဆောင်နေတဲ့ Zywoo က ဘယ်လိုတွေလက်စွမ်းဆက်ပြမလဲဆိုတာ ကြည့်ရမှာပါ။
North အနေနဲ့ပွဲဦးထွက်မှာ Vitality နဲ့တွေ့ရမှာမို့အခြေအနေက သိပ်မဟန်လှပါဘူး။ Jugi ကလည်း ၀င်လာတာသိပ်မကြာသေးတော့ အသင်းက stable မဖြစ်ပေမယ့် Aizy Kjarbye တို့လို star player တွေရှိနေတော့ ပုံမှန် Tier3အသင်းတွေကိုတော့ နိုင်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Neo ကိုခေါ်ပြီးနောက်ပိုင်း အခြေအနေသိပ်မကောင်းတဲ့ Faze ကတော့ ဒီ ပွဲ မှာ ကစားသမားကောင်း တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အသင်းဟာ ဒီလိုကောင်းပါတယ်ဆိုတာကို ပြသရမှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Neo အနေနဲ့လည်း လက်စွမ်းရော IGL ပိုင်းအရကော မပြသ နိုင်ခဲ့ရင် Pizza party ပေးရတော့မှာပါ ဒီပွဲမှာ အခြေအနေ မကောင်းခဲ့ ရင် နဂိုကတည်းက pro scene က ထွက်ဖို့လုပ်နေတဲ့ Guardian ကလည်း အနားယူ ဖို့အချိန်ပို ကပ်လာတော့မှာပါ။ One of the world best and talented player Niko ရဲ့ Play of the matches တွေကို မလွတ်တန်း Live ကြည့်ရဖို့တော့ မမေ့ကြပါနဲ့။
Tier2 အသင်းတွေထဲ မှာတော်တော်ကောင်းတဲ့ အသင်းဖြစ်ပြီး space soldier က star player calyx ကိုအသစ်စက်စက် ခေါ်ယူထားလို့lineup အသစ်လိုဖြစ်နေပေမယ့် လျော့တွက်လို့မရတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။
Faze နဲ့ပွဲဦးထွက်တွေ့ မှာဖြစ်လို့ upset လုပ်နိုင်မလား စွမ်းဆောင်ရည် ကစားပုံဘယ်လိုရှိလည်းဆိုတာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
NIP အနေနဲ့ pistol god Dennis ဟာ ESTA(အလွယ်ပြောရရင် VISA ပေ့ါ) ပြသနာတစ်ခုကြောင့် DH ပထမရက်ကို မရောက်နိုင်ပဲ ဒုတိယ ရက်လည်း ပွဲချိန်အမှီ ရောက်နိုင်မလားဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့် Coach Pita ကို အစားထိုးဆော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Rez Get Right Forest နဲ့ Lekro တို့က Dennis တစ်ယောက်စာကို cover လုပ်ပြီးဆော့သွားနိုင်မလား Coach Pita က ပဲ Dennis နေရာ ကို အလုံအလောက် ဖြည့်ပေး သွားမလားဆိုတာ မကြာခင်ကြည့်ကြရတော့မှာပါ။ Dennis ပြန်ရောက်လာပြီး အသင်းလူပြည့်နဲ့ဆိုရင်တော့ Group A lower bracket Champion လောက်ထိမှန်းနိုင်ပါတယ်။
China top team ဖြစ်တဲ့ Tyloo ဟာ Asia အသင်းတွေကိုတောင် struggle လုပ်နေရပြီး ခု DH အတွက်ကိုတော့ ပြင်ဆင်လာမယ်လို့မျော်လင့်ရပါတယ်။Bntet ရဲ့ Genius plays တွေနဲ့ Xccurate ရဲ့ Tier 1 awp play တွေ က အသင်းကို china no 1 နေရာ ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်သက်သာရစရာကတော့ ပွဲဦးထွက်မှာ လူတစ်ယောက်လွတ် နေတဲ့ Nip ကို နိုင်သွား နိုင်မလားဆိုတာက တော့ မကြာခင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုတည်းသော SEA အသင်းဖြစ်ပါတယ် လက်စွမ်းတွေကတော့ သေချာမသိရပေမယ့် မတည်ငြိမ်ပါဘူး Thailand အခြေစိုက်အသင်းဖြစ် ပြီး Thailand မှာတောင် No.1 နေရာကို ရဖို့ Alpha Red ကို မနိုင်သေးပါဘူး။ ဒီပွဲမှာ ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရသွားမလဲ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ပွဲတွေရနိုင်မလားဆိုတာကတော့….. First match is against liquid ပါခင်ဗျာ။
Ence အနေနဲ့ကတော့ သူတို့ကို underestimate လုပ်သွားတဲ့ Astralis ကိုကောင်းကောင်းကြီး 2-0 နဲ့ အနိုင်ယူပြီးနောက်မှာတော့ Player တွေရဲ့ ဆက်သွယ်မှုတွေ ယုံကြည်မှု တိုးတက်လာတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ် ထို့ အတူ Allu က လည်းသူ့ရဲ့ consistency ပိုကောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ် Summit4တုန်းက Vitality ကို အကြိတ်အနယ်ဆော့ခဲ့ပြီး ရှုံးခဲ့တာဖြစ်လို့ လက်စားချေဖို့ဆိုရင်တော့ Group B lower bracket winner တော့ ဖြစ် မှရမှာပါ။EZ4Ence မလားမထင်မှတ်ပဲ Round1-2 မှာတင်ပြုတ်မလား ကြည့်ကြရအောင်
ဟုတ်ကဲ့ကျတော် G2 fan ပါ KennyS မရောက်ခင်ကတည်းက Scream+Shox ကိုကြိုက်ခဲ့တာပါ NBK နဲ့Apex ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ် လက်ရှိ Lineup ကိုတော့ တော်တော် သဘောမတွေ့တာပါ ကျတော်သဘောမတွေ့သလို အသင်း အခြေအနေကလည်း Tier3 လောက်ထိကိုဆိုးရွားနေပါတယ် ကောင်းပြီဆိုရင်လည်း ထိန်းလို့မရအောင်ကောင်းကြပါတယ် KennyS ကတော့ Allu ထက် unstable ဖြစ်ပါတယ် Lucky ကတော့ CT site hold မှာအတော်ကောင်းပြီး Jacks နဲ့ Shox က တော့ Strategy နဲ့ aim ကောင်းတဲ့ player တွေပါ။ Shox က ပဲ IGL လုပ်ပေးနေရပြီး Clutches တွေကိုလည်း အောင်မြင် အောင်ဆော့ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ French counterpart ဖြစ်တဲ့ Vitality ကတော့ သူတို့ ကို competitive scene မှာမျက်ချေဖြတ် ခဲ့တာအတော်ကြာခဲ့ပါပြီးတစ်ချိန်က Top 1-G2 ကိုပြန်မြင်ရဖို့ကတော့ Fan တစ်ယောက်အနေနဲ့မမျှော်လင့်နိုင်တော့ပါဘူး။
Renegades ဟာဆိုရင်လည်း G2 ပြီးရင်ကျတော်အတော်ကြိုက်တဲ့အသင်းတွေထဲကတစ်ခုပါ old awper Nifty ရဲ့ ကစားပုံ တွေကို Gratisfaction ထက်ပိုသဘောကျပါတယ် Rifle ဆော့တာလည်း အတော် ကောင်းပါတယ် လက်ရှိတော့ Envy us မှာ secondary awper/rifler အနေနဲ့ဆော့နေပါတယ် ပြန်လာစေချင်တာမှန်ပေမယ့် Gratisfaction မရှိတဲ့ ကာလမှာ Smooya လို Star Player ကိုခေါ်ဆော့ပေမယ့် သိပ်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး အခု ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ Aussie Number1 ကြီး လက်စွမ်းပြ ပြီး Aussie အတွက်မရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Trophy ယူနိုင်လေမလား?
NRG အနေနဲ့ကထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပဲ အမှားနည်းရင်ပဲ အသာလေး Final ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဘရာဇီးက လူငယ်အသင်းလေး တစ်သင်းက Tier2 အသင်းတွေရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ အကယ်လို့ဒီပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းတွေရခဲ့ ရင် Mibr က Yuurih နဲ့ kcerato လို့ potential ရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုခေါ်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။ Winrate တော်တော် များပြီး Teamwork လည်းကောင်းသလို ခုန က ပြောသွားတဲ့ player2ယောက်ရဲ့ individual skill ကောင်းတာကြောင့် Darkhorse အသင်းလို့သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
Fnatic အနေနဲ့ကတောက်လျောက်ကောင်းခဲပြီးမှ အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေမှာ အမှားတစ်ချို့ကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေကနေလွှဲချော်နေခဲ့ပါတယ်။ တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် တော့ Xizt ကိုထုတ်ပြီး potential ရှိတဲ့ လူငယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုထပ်ခေါ်သင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်း IGL ကောင်းကောင်းလုပ် နိုင်တဲ့ player တစ်ယောက်ယောက်ပေါ့။
ဘယ်လိုပြောရမှန်းကိုမသိတော့တာပါခင်ဗျာ။ Organization အနေနဲ့က Merchandise တွေရောင်းရ ရုံလောက်ပဲ အသင်းကိုဆက်ထားနေတယ်လို့ ခံစားရတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေလောက်ပဲ ၀င်ပြိုင် အသင်းငယ်တွေကိုနိုင်ပြီး အသင်းကြီးတွေအကုန်ရှုံးနေလို့ပါ Vice နဲ့ cajunb က အသင်းအတွက် အတော်မသင့်တော်ဘူးလို့ ထင်နေရပါတယ်။
ဒီအသင်းကတော့ Tier3-4 လောက်ကအသင်းဖြစ်လို့ ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမရှိပါဘူး strong နေတဲ့ပုံလည်းမပေါက်တဲ့အတွက် upset ဖို့ကလည်းမမျော်လင့်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
ကဲအသင်းတွေလည်းစုံပြီးပွဲမစခင် အမြန်အပြီးရေးလိုက်ရလို့ လိုအပ်ချက်တွေများသွားရင်တောင်းပန်ရင်း
June လ 18 ရက်မှာစမယ့် ESL Pro League Season9Finals မတိုင်ခင်ပြန်ဆုံကြမယ်နော်။
Fairy’s Pick – FaZe Clan
Jerry – Vitality
KoBoo – Fnatic
KyiTha – Liquid
Hi! အားလုံးပဲ ကနျြးမာရှငျလနျးပါရဲ့လား ကတြျော Fairy ပါခငျဗြာ။ မကွာခငျစတော့မယျ့ DH Masters Dallas 2019 အတှကျ အသငျးတှရေဲ့ အခွအေနေ လေးတှေ သုံးသပျပေးသှားပါမယျ။ Double Elimination ကို မှ Group A Group B ခှဲထားလို့ အပိုငျးနှဈပိုငျးခှဲပွီးတငျပေးပါမယျ။
Liquid ကတော့ Individual skill တှေ ထိပျတနျးမှာ ဖွဈနဆေဲပဲဖွဈပမေယျ့ Vitality ကို CS Summit-4 semi-final မှာ 2-0 နဲ့ ရှုံးသှားတာက တော့ မယုံနိုငျလောကျအောငျကောငျးခဲ့တဲ့ Vitality ကွောငျ့လို့ပဲထငျပါတယျ မကွပှေဲပွနျနှဲမှာကို Bracket အရ စောစောတှေ့ ရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ Onfire ဖွဈနတေဲ့ Vitality ကိုသာ ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ရငျတော့ DH Masters ဟာသူတို့လကျထဲရောကျဖို့မြားသှားပါပွီ။
Vitality အနနေဲ့ကတော့ ပွငျသဈနိုငျငံ ရဲ့ Young and talented player Zywoo ရဲ့ လကျစှမျးတှနေဲ့အတူ CS Summit-4 မှာ မွငျတှေ့ ရမှာဖွဈပါတယျ G2 ကစားသမားဟောငျး NBK APEX တုိ့ရဲ့ အတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ အတူ တဈပါတျအတှငျး competitive scene က pro player တှရေဲ့ KD Difference မှာ Top 1 က ဦးဆောငျနတေဲ့ Zywoo က ဘယျလိုတှလေကျစှမျးဆကျပွမလဲဆိုတာ ကွညျ့ရမှာပါ။
North အနနေဲ့ ပှဲဦးထှကျမှာ Vitality နဲ့တှေ့ ရမှာမို့ အခွအေနကေ သိပျမဟနျလှပါဘူး။ Jugi ကလညျး ဝငျလာတာသိပျမကွာသေးတော့ အသငျးက stable မဖွဈပမေယျ့ Aizy Kjarbye တို့ လို star player တှရှေိနတေော့ ပုံမှနျ Tier3အသငျးတှကေိုတော့ နိုငျလောကျမှာဖွဈပါတယျ။
Neo ကိုချေါပွီးနောကျပိုငျး အခွအေနသေိပျမကောငျးတဲ့ Faze ကတော့ ဒီ ပှဲ မှာ ကစားသမားကောငျး တှနေဲ့ဖှဲ့ စညျးထားတဲ့ အသငျးဟာ ဒီလိုကောငျးပါတယျဆိုတာကို ပွသရမှာ ပဲဖွဈပါတယျ။ Neo အနနေဲ့လညျး လကျစှမျးရော IGL ပိုငျးအရကော မပွသ နိုငျခဲ့ရငျ Pizza party ပေးရတော့မှာပါ ဒီပှဲမှာ အခွအေနေ မကောငျးခဲ့ ရငျ နဂိုကတညျးက pro scene က ထှကျဖို့လုပျနတေဲ့ Guardian ကလညျး အနားယူ ဖို့အခြိနျပို ကပျလာတော့မှာပါ။ One of the world best and talented player Niko ရဲ့ Play of the matches တှကေို မလှတျတနျး Live ကွညျ့ရဖို့တော့ မမကွေ့ပါနဲ့။
Tier2 အသငျးတှထေဲ မှာတျောတျောကောငျးတဲ့ အသငျးဖွဈပွီး space soldier က star player calyx ကိုအသဈစကျစကျ ချေါယူထားလို့ lineup အသဈလိုဖွဈနပေမေယျ့ လြော့တှကျလို့မရတဲ့အသငျးဖွဈပါတယျ။
Faze နဲ့ ပှဲဦးထှကျတှမှေ့ာဖွဈလို့ upset လုပျနိုငျမလား စှမျးဆောငျရညျ ကစားပုံဘယျလိုရှိလညျးဆိုတာကွညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ။
NIP အနနေဲ့ pistol god Dennis ဟာ ESTA(အလှယျပွောရရငျ VISA ပေ့ါ) ပွသနာတဈခုကွောငျ့ DH ပထမရကျကို မရောကျနိုငျပဲ ဒုတိယ ရကျလညျး ပှဲခြိနျအမှီ ရောကျနိုငျမလားဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး အဲ့ဒါကွောငျ့ Coach Pita ကို အစားထိုးဆော့သှားမှာဖွဈပါတယျ။ Rez Get Right Forest နဲ့ Lekro တို့က Dennis တဈယောကျစာကို cover လုပျပွီးဆော့သှားနိုငျမလား Coach Pita က ပဲ Dennis နရော ကို အလုံအလောကျ ဖွညျ့ပေး သှားမလားဆိုတာ မကွာခငျကွညျ့ကွရတော့မှာပါ။ Dennis ပွနျရောကျလာပွီး အသငျးလူပွညျ့နဲ့ဆိုရငျတော့ Group A lower bracket Champion လောကျထိမှနျးနိုငျပါတယျ။
China top team ဖွဈတဲ့ Tyloo ဟာ Asia အသငျးတှကေိုတောငျ struggle လုပျနရေပွီး ခု DH အတှကျကိုတော့ ပွငျဆငျလာမယျလို့မြျောလငျ့ရပါတယျ။Bntet ရဲ့ Genius plays တှနေဲ့ Xccurate ရဲ့ Tier 1 awp play တှေ က အသငျးကို china no 1 နရော ကိုဆကျထိနျးထားနိုငျနတောဖွဈပါတယျ။ စိတျသကျသာရစရာကတော့ ပှဲဦးထှကျမှာ လူတဈယောကျလှတျ နတေဲ့ Nip ကို နိုငျသှား နိုငျမလားဆိုတာက တော့ မကွာခငျသိရမှာဖွဈပါတယျ။
တဈခုတညျးသော SEA အသငျးဖွဈပါတယျ လကျစှမျးတှကေတော့ သခြောမသိရပမေယျ့ မတညျငွိမျပါဘူး Thailand အခွစေိုကျအသငျးဖွဈ ပွီး Thailand မှာတောငျ No.1 နရောကို ရဖို့ Alpha Red ကို မနိုငျသေးပါဘူး။ ဒီပှဲမှာ ဘယျလိုအတှအေ့ကွုံတှရေသှားမလဲ ဒါမှမဟုတျ နိုငျပှဲတှရေနိုငျမလားဆိုတာကတော့….. First match is against liquid ပါခငျဗြာ။
Ence အနနေဲ့ကတော့ သူတို့ကို underestimate လုပျသှားတဲ့ Astralis ကိုကောငျးကောငျးကွီး 2-0 နဲ့ အနိုငျယူပွီးနောကျမှာတော့ Player တှရေဲ့ ဆကျသှယျမှုတှေ ယုံကွညျမှု တိုးတကျလာတာကိုမွငျခဲ့ရပါတယျ ထို့အတူ Allu က လညျးသူ့ ရဲ့ consistency ပိုကောငျးလာတာတှေ့ ရပါတယျ Summit4တုနျးက Vitality ကို အကွိတျအနယျဆော့ခဲ့ပွီး ရှုံးခဲ့တာဖွဈလို့ လကျစားခဖြေို့ဆိုရငျတော့ Group B lower bracket winner တော့ ဖွဈ မှရမှာပါ။EZ4Ence မလားမထငျမှတျပဲ Round1-2 မှာတငျပွုတျမလား ကွညျ့ကွရအောငျ
ဟုတျကဲ့ကတြျော G2 fan ပါ KennyS မရောကျခငျကတညျးက Scream+Shox ကိုကွိုကျခဲ့တာပါ NBK နဲ့ Apex ကိုလညျးကွိုကျပါတယျ လကျရှိ Lineup ကိုတော့ တျောတျော သဘောမတှေ့ တာပါ ကတြျောသဘောမတှသေ့လို အသငျး အခွအေနကေလညျး Tier3 လောကျထိကိုဆိုးရှားနပေါတယျ ကောငျးပွီဆိုရငျလညျး ထိနျးလို့မရအောငျကောငျးကွပါတယျ KennyS ကတော့ Allu ထကျ unstable ဖွဈပါတယျ Lucky ကတော့ CT site hold မှာအတျောကောငျးပွီး Jacks နဲ့ Shox က တော့ Strategy နဲ့ aim ကောငျးတဲ့ player တှပေါ။ Shox က ပဲ IGL လုပျပေးနရေပွီး Clutches တှကေိုလညျး အောငျမွငျ အောငျဆော့ပေးနိုငျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ French counterpart ဖွဈတဲ့ Vitality ကတော့ သူတို့ ကို competitive scene မှာမကျြခဖြွေတျ ခဲ့တာအတျောကွာခဲ့ပါပွီးတဈခြိနျက Top 1-G2 ကိုပွနျမွငျရဖို့ကတော့ Fan တဈယောကျအနနေဲ့မမြှျောလငျ့နိုငျတော့ပါဘူး။
Renegades ဟာဆိုရငျလညျး G2 ပွီးရငျကတြျောအတျောကွိုကျတဲ့အသငျးတှထေဲကတဈခုပါ old awper Nifty ရဲ့ ကစားပုံ တှကေို Gratisfaction ထကျပိုသဘောကပြါတယျ Rifle ဆော့တာလညျး အတျော ကောငျးပါတယျ လကျရှိတော့ Envy us မှာ secondary awper/rifler အနနေဲ့ဆော့နပေါတယျ ပွနျလာစခေငျြတာမှနျပမေယျ့ Gratisfaction မရှိတဲ့ ကာလမှာ Smooya လို Star Player ကိုချေါဆော့ပမေယျ့ သိပျအလုပျမဖွဈခဲ့ပါဘူး အခု ပွနျရောကျလာခဲ့ပွီဆိုတော့ Aussie Number1 ကွီး လကျစှမျးပွ ပွီး Aussie အတှကျမရတာကွာပွီဖွဈတဲ့ Trophy ယူနိုငျလမေလား?
NRG အနနေဲ့ကထှထှေထေူးထူးပွောစရာမရှိပဲ အမှားနညျးရငျပဲ အသာလေး Final ကိုရောကျနိုငျပါတယျ။
ဘရာဇီးက လူငယျအသငျးလေး တဈသငျးက Tier2 အသငျးတှရေဲ့ထိပျဆုံးမှာရပျတညျနပေါတယျ။ အကယျလို့ဒီပှဲမှာ ရလဒျကောငျးတှရေခဲ့ ရငျ Mibr က Yuurih နဲ့ kcerato လို့ potential ရှိတဲ့လူငယျတှကေိုချေါယူသှားနိုငျပါတယျ။ Winrate တျောတျော မြားပွီး Teamwork လညျးကောငျးသလို ခုန က ပွောသှားတဲ့ player2ယောကျရဲ့ individual skill ကောငျးတာကွောငျ့ Darkhorse အသငျးလို့သတျမှတျခငျြပါတယျ။
Fnatic အနနေဲ့ကတောကျလြောကျကောငျးခဲပွီးမှ အရေးကွီးတဲ့ပှဲတှမှော အမှားတဈခြို့ ကွောငျ့အောငျမွငျမှုတှကေနလှေဲခြျောနခေဲ့ပါတယျ။ တိုးတကျဖို့ဆိုရငျ တော့ Xizt ကိုထုတျပွီး potential ရှိတဲ့ လူငယျကစားသမားတဈယောကျကိုထပျချေါသငျ့တယျလို့မွငျပါတယျ။ဒါမှမဟုတျလညျး IGL ကောငျးကောငျးလုပျ နိုငျတဲ့ player တဈယောကျယောကျပေါ့။
ဘယျလိုပွောရမှနျးကိုမသိတော့တာပါခငျဗြာ။ Organization အနနေဲ့က Merchandise တှရေောငျးရ ရုံလောကျပဲ အသငျးကိုဆကျထားနတေယျလို့ ခံစားရတယျ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဖိတျချေါတဲ့ပွိုငျပှဲတှလေောကျပဲ ဝငျပွိုငျ အသငျးငယျတှကေိုနိုငျပွီး အသငျးကွီးတှအေကုနျရှုံးနလေို့ပါ Vice နဲ့ cajunb က အသငျးအတှကျ အတျောမသငျ့တျောဘူးလို့ ထငျနရေပါတယျ။
ဒီအသငျးကတော့ Tier3-4 လောကျကအသငျးဖွဈလို့ ထှထှေထေူးထူးပွောစရာမရှိပါဘူး strong နတေဲ့ပုံလညျးမပေါကျတဲ့အတှကျ upset ဖို့ကလညျးမမြျောလငျ့နိုငျပါဘူးခငျဗြာ။
ကဲအသငျးတှလေညျးစုံပွီးပှဲမစခငျ အမွနျအပွီးရေးလိုကျရလို့ လိုအပျခကျြတှမြေားသှားရငျတောငျးပနျရငျး
June လ 18 ရကျမှာစမယျ့ ESL Pro League Season9Finals မတိုငျခငျပွနျဆုံကွမယျနျော။
#Fairy #DreamHack #Dallas #CSGO